Ego ole ka 4-DHEA gbanwere ka testosterone? | AASraw
/blog/4-DHEA , gallery/Kedu otutu 4-DHEA na-agbanwe na Testosterone?
Ihe na 06 / 30 / 2018 by Dr. Patrick Young dere na 4-DHEA, gallery.
Ihe niile gbasara 4-DHEA
1.Gịnị Bụ 4-DHEA
2.Olee ka ọrụ 4-DHEA si arụ
3.I 4-DHEA a Prohormone
4.Gịnị Ka 4-DHEA baara?
5. Ọ bụ 4-DHEA bụ Anabolic Steroids
6.Otu esi eji 4-DHEA?
7. Otu esi choro 4-DHEA utịp utịp
8.Olee ka 4-DHEA si gbanwee ghọọ testosterone
9.Gịnị Bụ Nkehie n'etiti DHEA na 4-DHEA
11.4-DHEA Maka ire ere
I.4-DHEA ntụ ntụ isi agwa:
1. Kedu ihe bụ 4-DHEA?
4-DHEA ntụ ntụ, CAS 571-44-8, a makwaara dị ka 4-androstene-3b-ol, 17-one, 3β-Hydroxy-4-androsten-17-one, 3β-hydroxyandrost-4-en-17-one, 3β-hydroxy -D4-androsten-17-one, 3β-hydroxyandrost-4-en-17-one, 3β-hydroxy-etioallocholan-4-en-17-one. 4-Dehydroepiandrosterone (4-DHEA) bụ steroid nke bụ isomer nke 5-dehydroepiandrosterone.
4-DHEA ntụ bụ ihe na-emekarị na-abụghị methylated (na-abụghị 17AA) PRO-steroid. Ọ bụ ezie na 4-DHEA nwere ike ime ka estrogen dị mma, ma eleghị anya ọ gaghị ezuru iji kpatara mmetụta-n'akụkụ estrogen dị elu. Nsonaazụ zuru ezu ga-adị ka ma ọ bụ na 4-AD mbụ a machibidoro azụ na 2004. Ndị elu nke ụlọ a ga-emepụta ihe dị mma na nsị ahụ, na-enwe ọganihu n'ụzọ dị elu na ike. Ngwaahịa a nwere ike ịmepụta ụfọdụ bloat site na nsụgharị estrogen, bụ nke nwere ike ịdaba site na ịnye onye na-emepụta aromatase, ma nke a ga-emeri nnukwu nzube nke iji ụlọ a malite.
aha 4-DHEA, 4-Andro, 4-AD
molekụla Formula C19H28O2
molekụla arọ 288.42
Agba White ma ọ bụ Wepụ ọcha Crystalline ntụ ntụ
Oge Mbuga ozi n'ime oge 12 mgbe ịkwụ ụgwọ
Ụzọ nkwụnye ụgwọ WU, MG, BT, TT
ngwugwu foil akpa ma ọ bụ customization
Description 4-DHEA bụ ihe na-emekarị na-abụghị methylated (na-abụghị 17aa) pro-steroid. 4-DHEA, dịka DHEA, chọrọ usoro ntụgharị ntọala 2 nke gụnyere 3b-HSD na 17b-HSD iji gbanwee ya na Androstenedione / androstenediol, wee testosterone. Ihe mere 4-DHEA dịtụ iche na DHEA bụ njikọ abụọ na ọnọdụ 4th karịa 5th. Nke a na-eme ka 4-DHEA na-erughị estrogenic site n'ịnọghị eme ihe na estrogen receptor dị ka DHEA achọtara ime.
Ebe ọ bụ na onyinye a na-emekarị ma na-abụghị akụkụ methylated n'ozuzu ya-mmetụta ga-abụ nke dị nwayọọ. Otú ọ dị, akwa doses pụkwara ịkpata akpụkpọ ahụ, akpụkọ na ọbara mgbali elu. Ebe ọ bụ na steroid a abụghị 17AA, ọ ga-abụrịrị nchegbu banyere ya na-emetụta ọnọdụ HDL / LDL na-adịghị mma. Ebe ọ bụ na onyinye a nwere ike ịtụgharị ka testosterone ọ nwere ike tọghata DHT na ndị ọzọ metara na 5A. Nke a nwere ike ịbụ ezigbo nchịkọta na ogige ndị na-emepụta ihe ma ọ bụ ndị na-abụghị nke na-eme ka etrogenic nwee ike ịmepụta nsogbu na libido ma ọ bụ gyno n'ihi enweghị ike androgenic.
2. Kedu ka 4-DHEA si arụ ọrụ?
Mgbe e gbusịrị ya, 4-DHEA (4-Andro) abanye n'ọbara gị ma gbanwee n'ime testosterone. Ụlọ ọrụ ahụ ga-amalite inwe omume omume anabolic dị ịrịba ama, nke ga-eme ka ogo na ike na-abawanye mgbe ị na - eme ka ị na - enwe mmekọahụ - na - enye gị otu "Ecstasy Alpha Alpha".
3. Ndi 4-DHEA (571-44-8) a Prohormone?
Kedu ihe bụ Prohormone? Atụmatụ bụ ihe ngwọta bara uru maka nsonaazụ kacha mma. Ihe omumu bu ogige nke ana ekwu okwu. Ihe omuma putara na onyinye ndia bu uzo ozo maka hormone. Na nke ha, ha adighi irè. Ọrụ ha bụ ikesa site n'ọbara. Ozugbo a gbanwere prohormone na hormone, ọ na-achịkwa ụkwara hormone. Chee echiche na prohormone bụ pro-protein nke na-atụgharị na protein iji melite arụmọrụ egwuregwu na ahụ ike.
4-DHEA bụ prohormone, ma doo anya, 4-DHEA abụghị prohormone n'ihi na ọ chọrọ mgbanwe abụọ iji ghọọ Testosterone. Ya mere, chee banyere 4-DHEA dị ka ihe gbasara "pro-pro-hormone".
4-DHEA (4-Andro), bụ ndụmọdụ nke na-enye ndị ọrụ aka irite uru na DHEA na-enweghị mmetụta ndị na-adịghị mma nke etugoro estrogenic. 4-DHEA bụ isomer DHEA. DHEA, ma ọ bụ dehydroepiandrosterone, bụ hormone nke na-emepụta site na gland.
Ọkụ gwakọtara bụ gland nke dị n'elu akụrụ. Ọ bụ onye na-emepụta ihe kachasị mkpa nke homonụ na ahụ gị nke na-enye aka ịhazi gịmoni na cortisol. Ịchọrọ homonụ a maka ezi ahụike na lanarị. Otu n'ime hormones kachasị mkpa na-emepụta site na gland adrenal bụ adrenaline. Ihe agha gị ma ọ bụ nke ị na-emeghachi n'ọnọdụ ọnọdụ nrụgide sitere na hormones ndị a dị egwu na akụrụ gị.
HHEM nke hormone nke glands na-emepụta, ma ụbụrụ na-emekwa ya. DHEA na-enye ohere maka mmepụta f androgens na estrogen, nke bụ uru kachasị mkpa ndị chọrọ ịbawanye ahụ ike na ahụ ike. Dị ka ahụ dị afọ, mmepụta DHEA n'anụ ahụ na-ebelata. Mbelata nke DHEA n'anụ ahụ na-eduga na ọrịa mberede, belata mmekọahụ, na osteoporosis.
4-DHEA bụ prohormone nke na-eme ka arụ ọrụ androgenic dị mma ma nwee ike weghachite akụkụ DHEA n'ime ahụ. Ọ na-anọgide na-arụ ọrụ ruo mgbe ememme ahụ na-akpata n'oge kwesịrị ekwesị.
4. Kedu ihe 4-DHEA bara?
Na mgbakwunye, 4-DHEA uru na-atụ anya inweta ihe ndị a:
-Better ike na ike
-Nwepụ nke a na-egbu egbu
-Nwee obi gị
-Anweghachi oge mgbake
Na oge kwesịrị ekwesị, ị ga-achọpụta na ị na-agbake site na mgbatị ọsọ ọsọ karịa mgbe i mere mgbe ị gachara.
-Anwere na libido
Ị ga-ahụ mmepụta siri ike ma ọ bụ orgasms dị ike karị. Ị ga-achọpụtakwa na ị ga-enwe ume karịa ụra.
-Nn-methylated, ya mere egbochi imeju gị
N'ezie, uru abụọ 4-DHEA (571-44-8) na-abawanye ike na uto ahụ. Ihe ndị a bụ ihe ị na-achọ ịmepụta ahụ ike. Ihe kacha mma 4-DHEA kacha mma ga-enyere gị aka na mgbake, n'ihi na mgbe ahụ i nwere ike ịga ụlọ ọrụ ugboro ugboro ma nweta ngwa ngwa.
5. 4-DHEA bụ Anabolic Steroid?
Nyocha, ee. Mana ọdịiche dị n'etiti steroid na 4-andro na-eme ka ọ bụrụ iwu na United States. Ihe kpatara ya bụ 4-DHEA, aha ọzọ maka 4-andro, nwere mgbanwe nke ahụ anyị na-emepụta.
DHEA chere - gbalịa ma mee ka ụda nke a pụta - dehydroepiandrosterone, nke bụ otu n'ime ụbụrụ na-ekesa nke ukwuu n'ime ahụ mmadụ.
Site na usoro ngbanwe nke enzyme, ihe mgbakwunye 4-andro na-aghọ ọgwụ ndị na-eme omenala ndị na-agabiga na imeju.
Ọ na-abanye n'ọbara dịka ụbụrụ na-ahụ ọkụ, nke ahụ gị na-eji dịka ụbụrụ nke na-emekarị. Ma ọ dịghị ebibi imeju gị, na-eme ka ọ bụrụ ihe mgbakwunye nchekwa.
6. Otu esi eji 4-DHEA?
Maka ndị mbido, i kwesịrị iji 4-DHEA mee ihe (4-DHEA usoro onunu ogwu) maka izu 4-6, n'etiti 300-500 mg kwa ụbọchị.
Maka ndị ọzọ ma ọ bụ ndị nwere ọgụgụ isi ma ọ bụ ndị na-eme ihe ike, i nwere ike ịga maka izu 6-8 wee gaa na 300-750 mg 4-DHEA dosage kwa ụbọchị.
A ghaghị ịgbaso nke a n'ụzọ doro anya, n'ihi na 4-andro bụ prohormone nke a na-agaghị ejikọta ya. Jide n'aka na ị na-arapara na usoro siri ike, gụnyere oge na ịgba ọsọ.
N'ime oge a, ị ga-atụ anya na ị ga-enweta 8-10 pound nke uru ahụ.
Ụzọ kachasị mma bụ iji kewaa ụbọchị gị, otu akụkụ na AM na onye ọzọ na PM.
Ma ọ bụ, maka nsonaazụ dị mma, nara otu ọkara nke mgbakwunye gị otu awa tupu mgbatị gị na nri tupu ị lakpuo ụra. Nke a na-eme ka ọganihu kachasị mma, umewanye, na mgbake.
7. Kedu ka esi kwado ihe mmetụta 4-DHEA?
4-DHEA (4-Andro) enweghị obere mmetụta / mmetụta 4-DHEA. Ị nwere ike ịnwe mgbanwe ntụgharị estrogen obere, mgbajiri ahụ ike, ọbara mgbali elu, mmegide ma na ụfọdụ gynecomastia (gyno).
8. Ego ole ka 4-DHEA gbanwere ka testosterone?
Nke a bụ ajụjụ anwansi nke onye ọ bụla chọrọ ịma. Ma ọ dị mwute, azịza ya bụ "ọ dabere" na nke ahụ pụtara na ọ dabere na onye ahụ. Ọ bụrụ na ha nwere ọkwa elu aromatase dị iche iche mgbe ahụ ị nwere ike inweta ụfọdụ estradiol. Ọ bụrụ na enwere ọtụtụ enzymes HSD, ị nwere ike ịnweta nnukwu nsogbu na testosterone. Ọ na-adabere na onye ahụ, ma ụfọdụ ọmụmụ egosiwo ntụgharị 30% na ndụmọdụ - nke dị mkpa.
Ebe ọ bụ na ọ na-abanye n'ime ọtụtụ akụkụ ahụ, ụzọ kachasị mma iji 4-DHEA (571-44-8) dị ka obere cofactor n'oge okirikiri gị. 4-DHEA ekwesighi ịbụ ezigbo prohormone na nchịkọta gị. A na-eji ya na ndụmọdụ ndị ọzọ dịka 1-DHEA na 2: 1 ma ọ bụ 3: nchịkọta 1 (dabere na ụdị ahụ gị - ectomorphs kwesịrị iji 2: 1, ebe endomorphs kwesịrị iji 3: 1).
9. Kedu ihe dị iche n'etiti DHEA na 4-DHEA
Kedu ihe dị iche n'etiti DHEA na 4-DHEA
aha DHEA 4-DHEA
Mmetụta dị na ya -Agba nká (ike ntorobịa)
-Ekwu ntachi obi
-Ibelata ịhapụ (anti-catabolic)
-Immune usoro -Nke uka uka (njigide nitrogen)
Isi metabolite 5-androstenediol (5-AD) 4-androstenediol (4-AD)
Description A na-ewere DHEA "mkpụrụ ndụ" ma ọ bụ DHEA mgbe niile. A pụrụ ịkpọ ya 5-DHEA, ebe ọ bụ na njikọ abụọ dị na ọnọdụ 5th.
DHEA amarawo na ndimbata mmadu na-eme ka mmadu nwekwuo ndu ebe 1980 si. A na-eji ya eme ihe maka ikike ya iji kwado ume na izu ike n'ozuzu na 50-100mg / ụbọchị. (1-3) Na nso nso a, e jiriwo ụdị DHEA dị elu iji melite ngwongwo nke ahụ n'ihi mmetụta nke anabolic na mmetụta thermogenic DHEA. (1, 4) Nke a na-eme ka DHEA kacha mma ịhọrọ maka egbutu oge calorie na-adịghị eri ihe, ebe DHEA nwere ezigbo ahụ ike na-egbochi ya. (1, 17)
DHEA na-alagharị na testosterone na ọnụego banyere 1%, Otú ọ dị, ọ nwere nnukwu mgbanwe na 5-androstenediol, bụ ebe ọ na-enweta mmetụta dị nro na andbolic dị nro. (5-8) Njirimara thermogenic DHEA sitere na ntughari ya na 7-oxo-DHEA. (4)
N'ihi mmetụta dị nwayọọ na androgenic nke DHEA, ọ na-adịkarịghị emepụta ntutu isi ma ọ bụ ihe otutu. Ọ bụ ezie na DHEA nwere mmetụta estrogenic kwesịrị ekwesị, ọ na-esiteghị na-emepụta mmetụta nke estrogenic na-adịghị mma (1-3) Ụfọdụ ndị ọzọ na-ejikọta ọnụ na-ekwu na nchekasị ma ọ bụ ụra na DHEA, bụ nke yiri ka ọ na-emetụta ihe mmechi ahụ na ụbụrụ. (3) Otú ọ dị, a na-akọkwa mmetụta a dị ka "ike mkpali" nke bụ uru DHEA na-akọ ugboro ugboro.
N'ihi ọtụtụ uru dị iche iche nke DHEA na njirimara nke hormonal kwesịrị ekwesị ọ nwere ike jiri ya mee ihe ngwa ngwa maka ịcha, ma ọ bụ iji nọgide na-adabere n'oge a na-agbanye mgbidi. 4-DHEA bụ isomer DHEA. Ọdịdị ya yiri DHEA mgbe ọ bụla, ma njikọ abụọ na ọnọdụ 4th gbanwere n'ụzọ dị ịrịba ama na mmetụta ya.
4-DHEA na-agbanwe ngwa ngwa gaa na 4-androstenediol, karịa 5-androstenediol, na-eme ka ọrụ ike anabolic karịa 2x n'elu DHEA mgbe niile. (6-8, 11) 4-DHEA na-atụ anya ka ọnụego dị elu dị elu iji testosterone tụnyere DHEA mgbe niile. (6, 7) Na 4-DHEA enweghikwa calorie nke na-ere ọkụ na-ere ọkụ, ya mere ọ na-eme ka calorie dị elu maka njedebe. (4) Nke a na-emewanye ngwa ngwa anabolic ma belata mmezi thermogenic ga-eduga n'ichepụta uru dị ike, na-etinye aka n'anụ ahụ, na uru dị arọ.
4-DHEA ga-enwe nsụgharị nke estrogen dị nwayọọ nke nwere ike iji nwayọọ kwụ ọtọ na steroid nke na-abụghị aromati dị ka androsterone ma ọ bụ 1-DHEA. Otutu uru ga - adi ka "4-AD" nke a machibidoro na 2004 Steroid Control Act.
Dị ka ndị ọzọ DHEA isomers, 4-DHEA na-emekarị na-adịghị na-egbu egbu. (9) A na-ewere mmetụta dị iche iche dịka mmanu mmanu ma ọ bụ ịkụzi ọmụmụ na-adị nwayọọ ma na-adịru nwa oge. Ihe kachasị dị ịrịba ama ga-abụ mmebi nke mmepụta nke testosterone, nke na-eme ka PCT dị mkpa mgbe ọ gasịrị. 4-DHEA n'ozuzu ya bụ onye na-elekọta ụlọ na-arụ ọrụ nke ọma.
Naanị ọdịda nke 4-DHEA bụ ọnụ ahịa dị elu n'ihi oke dị elu nke achọrọ iji hụ mmetụta dị mkpa nke ụlọ ahụ.
10. Nkọwa kachasị elu nke 5
4-DHEA (nke a makwaara dịka 4-Androsterone - 4b-hydroxy-androst-3-ene-4-one) bụ kpọmkwem ihe na 17-Androstenediol na 4-Androstenedione, nke bụ kpọmkwem ihe na-egosi testosterone. Nke a pụtara na site na usoro ntọghata abụọ, 1-DHEA ga-atụgharị n'ime testosterone n'ime ahụ. Dị ka 4-Andro, prohormone a abụghị nke methylated na ya adịghị egbu egbu na imeju. Otú ọ dị, ọ na-esi ísì ụtọ nke estrogen, ya mere, eji onye aromatase inhibitor (AI) dị mkpa mgbe ị na-agba ígwè a.
Ngwunye dị mma nke 4-DHEA ga-abụ 300-750mgs kwa ụbọchị dabere na ahụmịhe onye ọ bụla na ọgwụ mmezi arụmọrụ (PEDs). Banyere oge ndụ a na-atụ aro, onye ọrụ ga-agba ya maka izu 6-8. Dịka e kwuru n'elu, ị ga-eji onye aromatase na-egbochi imebi estrogen n'oge oge okirikiri, yana ihe na-egbochi ọbara mgbali elu na ọkwa nkịtị. Mgbe o jiri 4-Andro, a ga-achọ kaadị PCT. Nke a ga-agụnye clomid na 25mg kwa ụbọchị, nolvadex na 20mg kwa ụbọchị, na ezigbo ihe nyocha nke testosterone maka izu 4.
1-Andro (nke a makwaara dịka Androsterone - 3b-hydroxy-androst-1-ene-17-one) bụ horroone na-adịghị ike na steroid na-adịghị ike na ihe dịka 1 / 7th nke ike nke testosterone. Ozugbo a kpọbatara ahụ, ọ na-agbanwe na 1-Testosterone. Ebe ọ bụ na onyinye a agbanweghị na estrogen ma ọ bụ DHT, enweghị mmetụta ọ bụla nke estrogenic, dị ka gynecomastia ma ọ bụ njigide mmiri. Tụkwasị na nke ahụ, 1-Andro abụghị onye nke na-abụghị methylated, n'ihi ya, ọ ga-adị obere ma ọ bụ ghara imeju nsị ọ bụla, na-egbochi imeju na-akwado ihe mgbakwunye na-enweghị isi. Ka o sina dị, ọ ga-ekwe omume maka ọrụ ọbara iji gosipụta enzyme imeju ntakịrị elu.
5-DHEA (aha njirimara: 5-DHEA - 3b-hydroxy-androst-5-ene-17-one) bụ hormone nke a na-emekarị site n'anwụ ahụ dị n'ime ahụ mmadụ (kpọmkwem n'akụkụ akụrụ, imeju, na ule na ụmụ nwoke). Dika ị maralarịrị, DHEA na-eje ozi dị ka ihe na-aga n'ihu na hormones nwoke na nwanyị (androgens na estrogens), ọ na-arụ ọrụ site na ịtụgharị na Androstenedione, bụ nke a na-agbanwezi na testosterone.
Epi-Andro (nke a makwaara dị ka: 3b-hydroxy-androstane-17-one) bụ nke 5a-reductase enzyme na-emepụta ahụ. Enzyme a anaghị adịkarị n'ime ụfọdụ mmadụ, ya mere, mmepụta ihe dị iche iche ga-adịgasị iche site na mmadụ gaa na onye. Mgbe Epi-Andro na-ekwu okwu ọnụ, Epi-Andro gbanwere dihydrotestosterone (DHT), nke bụ 5 ugboro dị ka androgenic dị ka testosterone, na-eme ka nke a dị mma n'ịgbalite ikpo ahụ muscle, ike siri ike, ike, na iwe. Dịka eziokwu, ụfọdụ ndị ọrụ ahụ enweela mmụba na ụba uru mgbe ha na-eji ndụmọdụ a. Ebe ọ bụ na onyinye a bụ "akọrọ" (enweghị nsụgharị estrogen), a na-ejikarị ya eme ihe mgbe ọ na-achọ inweta ike na ịdabere na nchekwa na-enweghị nkwụsị mmiri ọ bụla.
Akwukwo a bu ihe puru iche n'ihi na obunaghi ahia. Dị ka aha ya na-egosi, 1,4-DHEA (nke a makwaara dịka: 1,4-DHEA - 3b-hydroxy-androsta-1,4-diene-17-one) bụ ọhụrụ DHEA nke ochie Boldione prohormone nke amachibidoro na 2012. Abụọ n'ime uru ndị a tụrụ anya na ngwaahịa a bụ mmetụ agụụ na nkwonkwo aka.
11. 4-DHEA (571-44-8) Maka ire ere
Ọtụtụ ndị chọrọ ịmara banyere okirikiri zuru okè na prohormone zuru oke n'ihi na e nwere ọtụtụ ihe ọmụma na-ezighi ezi banyere ihe ọ bụla a na-eji mee ihe ọ bụla na ihe kpatara eji eme ha.
Mgbe ịchọrọ ịmalite ike na ahụike ahụ ike, ihe gbasara 4-DHEA bụ otu ụzọ isi nweta ahụike na ahụike kacha mma. 4-DHEA bụ ndụmọdụ nke na-akwalite njigide nitrogen, ike, na olu ọbara na-asọba na ahụ ike. Na-agbakwụnye 4-DHEA maka usoro ịme ume na ọzụzụ nke ụlọ gị nke nwere utịp utịp na obere mmetụta utịp.
4-DHEA ọkara ndụ dị mkpirikpi, ịnwere ike ịtọ ya na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ onyinye ọ bụla ma ọ bụ ihe anabolic na-enweghị nchegbu gbasara mmetụta ọ bụla a na-achọghị, ma ọ bụ ya na 1-Andro na Epi-Andro (ogwe akọrọ) dị ka nke a bụ ọrụ kachasị mma n'ibelata ma ọ bụ zere mmezi njigide mmiri.
O siri ike ịchọta 4-DHEA maka ire ere n'ịntanetị, AASraw (www.aasraw.com) na-enye usoro ihe ọmụmụ ngwaahịa ngwaahịa, ezigbo mma, ọnụahịa asọmpi, ọrụ nchekwa na ngwa ngwa ngwa ngwa.
Tags: 4-DHEA ntụ ntụ, zụta 4-DHEA ntụ ntụ
Desogestrel Powder For Sale: Nyocha & Ụdị & Mmetụta	Ihe kachasị iwebata maka Megestrol acetate ntụ ntụ